न्यायाधीशहरूमाथि १०९ उजुरी - Everest Dainik - News from Nepal
न्यायाधीशहरूमाथि १०९ उजुरी
२०७६, ८ कार्तिक शुक्रबार
काठमाडौंः न्यायाधीशको दोषी चस्मा ! आठ वर्षअघि ‘घ कुमारी’माथि भएको बलात्कारमा बैतडी जिल्ला अदालतले १३ वर्ष जेल सजाय तोकेका अभियुक्तलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्‍यो, एउटा अदालतबाट १३ वर्ष सजाय पाएका व्यक्ति अर्को अदालतबाट पूर्ण निर्दोष हुनु आश्चर्य हो, फेरि सर्वोच्चले अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ
– जिल्ला अदालत दिन्छ १३ वर्ष सजाय, पुनरावेदनमा ‘पूर्ण निर्दोष’ साबित
९ चैत ०६८ मा बैतडीमा बलात्कृत भएकी चेली ‘घ कुमारी’ले अनेक कानुनी आरोह–अवरोहबीच न्याय पाउने भएकी छिन् । उनीमाथि बलात्कार भएको र दोषीहरूलाई सजाय हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण भने एक महिनाभित्र हुनेछ । तर, यो मुद्दा अनेक कानुनी दाउपेच हुँदै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो ।
०६८ को एसएलसीको तयारी गरिरहेकी ‘घ कुमारी’ बैतडीको पाटनबजारस्थित सागर भट्टको पसलमा गेसपेपर किन्न गएकी थिइन् । तर, भट्टले गेसपेपर आफ्नोमा नभएको भन्दै नजिकैको चाँदनी फोटो स्टुडियोमा पाइन्छ भनेर पठाएका थिए । तर, ‘घ कुमारी’ पुग्दानपुग्दै भट्ट पनि स्टुडियो पुगेका थिए । उनी र स्टुडियो सञ्चालक अमरराज अवस्थी मिलेर किशोरीलाई भित्र लगेका थिए । उनीहरूले खुट्टा र दायाँ पाखुरामा सुई लगाएर बेहोस बनाई बलात्कार गरेका थिए । यो विषय तत्कालै राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो । २२ फागुन ०६९ मा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतले दुवैजनालाई बलात्कार गरेकोमा आठ र सामूहिक बलात्कार गरेकोमा पाँच गरी १३–१३ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । दुवैबाट ५० हजार रुपैयाँका दरले पीडित युवतीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला पनि अदालतले गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस उच्च अदालतका ८४ न्यायाधीशको सरुवा, को कहाँ पुगे? (सूचीसहित)
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले दिएको फैसलाविरुद्ध अभियुक्तहरू पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर पुगेका थिए । १५ वैशाख ०७१ मा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा उल्ट्याउँदै दुवैलाई सफाइ दिएको थियो । एउटा अदालतबाट १३ वर्ष सजाय पाएका व्यक्ति अर्को अदालतबाट पूर्ण निर्दोष हुनु आश्चर्य हो । तर, पुनरावेदनको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पीडित २ पुस ०७१ मा सर्वोच्च आएकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको बिहीबारको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कारका अभियुक्त दुवै व्यक्ति दोषी भएको ठहर गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस उच्च अदालतका लागि १५ न्यायाधीश सिफारिस
‘घ कुमारी’लाई बलात्कार भएको नदेख्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशमध्ये नरबहादुर शाही भने बर्खास्तीमा परिसकेका छन् । तर, यो विषयमा होइन । गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले उनलाई बर्खास्ती गरेको हो । भरतपुरको मुद्दा चित्त नबुझे पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन सक्नेमा पोखरामा मुद्दा हेरी फैसला गरेको आरोप शाहीलगायत तीनजना न्यायाधीशमाथि लागेको थियो । परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र शाहीमाथि छानबिन गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएका थिए । परिषद्ले गत १३ साउनमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले ‘तारेख खेपिरहन नसक्ने’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा बुझाएका थिए । दुवैजनाको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै परिषद्को बैठकले उनीहरूको उजुरी तामेलीमा राखेको छ । न्यायाधीश शाहीसँग परिषद्ले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै परिषद्ले १ कात्तिकमा उनलाई बर्खास्त गरिसकेको छ । यो समाचर नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस उच्च अदालतमा तीन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
ट्याग्स: १०९ उजुरी, न्यायाधीश